“Lukaku wuxuu si fudud kaga sarra mari karaa Cristiano Ronaldo” – laacib hore ee kooxda Inter Milan ah - Hargeele - Wararka Somali State
(Milano) 11 Sebt 2019. Kooxda Inter Milan ayaa xagaagan la soo saxiixatay weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku kaas oo ay kala soo wareegeen naadiga Manchester United.
Laacibkii hore xulka qaranka Holland iyo kooxda Inter Milan ee Andy van der Meyde ayaa xaqiijiyay in Lukaku uu ka sara mari doono laacibka reer Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkan.
Romelu Lukaku ayaa awooday labadiisii kulan ugu horeysay kooxda Inter Milan ee horyaalka Serie A inuu dhaliyo 2 gool, wuuuna si la mid ah caawiyay 2 kale, taasoo cadeeneysa in sanadkan uu si adag ugu dagaalami doono ku guuleysiga abaal-marinta gooldhaliyaha ugu sareeya ee horyaalka Talyaaniga.
Haddaba laacibkii hore xulka qaranka Holland iyo kooxda Inter Milan ee Andy van der Meyde ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in horyaalka Serie A ay tahay meesha loogu tala galay Romelu Lukaku”.
“Waa mid dhaqsi badan, wuxuu dhalin karaa goolal badan, wuxuu leeyahay qaab dhismeed adag, taasina waxay dhibaato dhab ah ku abuureysaa daafaca ka soo horjeeda”.
“Lukaku wuxuu si fudud ku garaaci karaa Ronaldo. Wuxuu had iyo jeer muujiyey inuu yaqaano sida loo dhaliyo goolasha, waa weeraryahan toos ah ee aad u fiican, halka Ronaldo inta badan uu ka ciyaaro dhanka garabka”.
Waxaa xusid mudan, in Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda ay xili ciyaareedkan sida adag ugu dagaalami doonaan ku guuleysiga horyaalka Serie A ee Juventus, 6-da Oktoobar ee soo aadan.
“Kuma badelan laheyn wax walba oo aan ku guuleystay koobka adduunka” Messi